ကြှနျုပျတို့အကွောငျး - NINGBO YINZHOU DONGAO CO ချ. သေဆုံး, LTD မှ။
2006 ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့ပြီးခံရကတည်းကကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီ R & D နှင့်လူမီနီယံအလွိုင်းနဲ့ဇင့်အလွိုင်းထုတ်ကုန်များ၏ကုန်ထုတ်လုပ်မှုအတွက်အထူးပြုခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ ကုမ္ပဏီ Yinzhou ခရိုင်, Ningbo မြို့, Zhejiang ပြည်နယ်မှာတည်ရှိပါတယ်။ အကြောင်းကို 13.500 စတုရန်းမီတာဧရိယာဖုံးအုပ်လောက် 10000 စတုရန်းမီတာဆောက်လုပ်ရေးဧရိယာ။
ကျနော်တို့အအေးအခန်းထဲက 800T မှ 160T7ယူနစ် ချ. စက်တွေသေဆုံးရှိသည်, ပူအခန်းထဲက 168T မှ 50T3ယူနစ် ချ. စက်တွေသေဆုံးလျက်ရှိသည်။ စက်စင်တာများနှင့် CNC တွင်ခုံများ 20 ကျော်ယူနစ်, ultrasonic သန့်ရှင်းရေးလိုင်းများ 2sets ။ တဦးတည်းအမှုန့်အပေါ်ယံပိုင်းထုတ်လုပ်မှုလိုင်း။ စက်မှုအပြောင်းအလဲနဲ့ပစ္စည်းကိရိယာများအမျိုးမျိုး 50sets ထက်ပို။ ရေနံတွင်းတူးစက်တွေကဲ့သို့သော, ဒါပေါ်မှာစက်, တုန်ခါမှုစက်များနှင့် polishing, blasting စက်ပစ်သတ်။ ကျနော်တို့ထိုကဲ့သို့သောစသည်တို့ကို CMM, Spectrometer နှင့် pneumatic တိုင်းတူရိယာအဖြစ်အဆင့်မြင့်စမ်းသပ်တူရိယာမျိုးကိုလည်းပြီ
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်ဥရောပနှင့်မြောက်ဘက်အမေရိကားတင်ပို့နေကြသည်။ အဓိကအားဖြင့်စက်မှုလုပ်ငန်းသုံးစက်ကိရိယာများ, မော်တော်ယာဉ်, ဆေးဘက်ဆိုင်ရာလယ်ကွင်းများနှင့်အာကာသလေဆိပ်အစိတ်အပိုင်းများအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်များ၏အတော်များများ OEM ဖြစ်ကြသည်။
နှစ်တွေဖောက်သည်ယှဉ်ပြိုင်ထုတ်ကုန်နှင့်ဝန်ဆောင်မှုများပေး commited ခံရအယူအဆကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ငန်းမစ်ရှင်ဖြစ်ပါသည်, နှင့် "သမာဓိ, ဆန်းသစ်တီထွင်မှု, Professional ကဦးဝင်း-Win" ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဓိကတန်ဖိုးများဖြစ်ပါတယ်။ သိပ္ပံနည်းကျ, နည်းပညာဆိုင်ရာတီထွင်ဆန်းသစ်မှုအပေါ်မှီခိုလျက်, ပြည်တွင်းရေးအလားအလာကိုအသာပုတ်, တက်ကြွစွာထုတ်ကုန်အသစ်တွေဖွံ့ဖြိုး, စျေးကွက်ချဲ့ထွင်။ ကြိုးစားအားထုတ်မှု၏နှစ်ကြာပြီးနောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီအများအပြားကျော်ကြားပြည်တွင်းနှင့်ပြည်ပလုပ်ငန်းတွေများ၏အသိအမှတ်ပြုမှုအနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ကုမ္ပဏီ stably ကျန်းမာ, စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးနိုင်ပါသည်။
E-mail ကို: ylf@yzdongao.com
E-mail ကို: sales@yzdongao.com
နေရပ်လိပ်စာ: Shangcheng Village, Tangxi Town, Yinzhou district, Ningbo, China